Motivation for success :: मृतक परिवारको पीडामा ‘नुन खुर्सानी’ छर्किदै भारतीय बीमा कम्पनी एलआईसी नेपाल
प्रकाशित मिति : मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौँ – भारतीय बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड (एलआईसी नेपाल)ले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने गरेको पाइएको छ । बीमा गर्दा चिप्लो धसेर पोलिसी बिक्री गर्ने एलआईसी नेपालले दाबी भुक्तानीमा भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।
आजभन्दा चार वर्षअघि बीमा गरेका स्वः अर्जुन कुमार अधिकारीको परिवारलाई भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मृतकका दाइ चक्र बहादुर अधिकारीले एलआईसी नेपाललगायतका कम्पनीले आफ्नो भाइको दाबी भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
मोटिभेट न्यूजसँग कुरा गर्दै अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूले मृत्युले स्तब्ध भएका परिवारलाई पीडामाथि पीडा दिने गरेको बताए । उनका भाइले आजभन्दा ४ वर्षअघि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको बीमा गरेका अधिकारीको यही बैशाखमा मृत्यु भएको थियो । एलआईसी नेपालको १५००५१४५१ पोलिसी नम्बर रहेको उनको बीमा लेखमा केही दिनअघि दाबी भुक्तानी माग गरेका थिए ।
‘बीमा कम्पनीले कहिले के मिलेन भन्छ, कहिले के मिलेन भन्छ । म जस्तो मान्छेलाई त कम्पनीले यसरी झुलाउँछ भने अरुलाई यीनीहरुले के गरेका होलान् ?’, मोटिभेटसँगको कुराकानीमा अधिकारीले भने, ‘एलआईसी नेपाल मृत्यु प्रमाणित भएन भनेर बखेडा झिक्छ । वडा कार्यालयबाट मृत्यु दर्ता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कागज, प्रहरी मुचुल्का, अस्पतालको रिर्पोट, वकिलको कागज दिदासमेत मृत्यु प्रमाणित हुँदैन भने के कुराले मृत्यु प्रमाणित हुन्छ ?’
चितामा जल्दै मृतक अर्जुन कुमार अधिकारी
कम्पनीले हुँदै नभएको दुःख दिएर झुलाएको पीडितको आरोप छ । ‘अस्पतालको रिपोर्ट भएन भन्छ । अस्पतालले दिने डेथ सर्टिफिकेटले नमान्ने कस्तो बीमा कम्पनी हो ।’ आक्रोषित हुँदै अधिकारीले भने, ‘ठूलो डक्टरको हस्ताक्षर चाहियो रे ? एउटा मृत मान्छेको सर्टिफिकेट लिन कति चोटी अस्पताल जाने ? मान्छे मरेर एउटा पीडा छदैछ अर्को पीडा दिन मिल्छ ।’
एलआईसी नेपालसँगै नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले पनि यस्तै झुलाएको उनको भनाई छ । ‘नेपाल लाइफले आइतबार दिन्छु भनेको छ । एलआईसीले कहिले दिने ठेगान छैन् । आज फेरी जान्छु । १०/१२ पटक कम्पनीको कार्यालय धाइसके ।’ उनले भने, ‘एलआईसीलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छु । अर्को हप्तासम्म भुक्तानी गरेनन् भने कोहलपुरबाट सबै बीमा कम्पनीलाई लखेट्ने हो । उनीहरुको ज्यादती बढी नै भएको रहेछ ।’
मृतकका दाई चक्र बहादुर अधिकारी
यता एलआईसी नेपालले अधिकारीको दाबी झुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कम्पनीका कोहलपुरका शाखा प्रबन्धक सुर्य बहादुर बुढाथोकीले बाँके जिल्लामा भइरहेको निषेधाज्ञाका कारण भुक्तानी गर्न ढिलाई भएको बताए ।
‘असर १ गतेसम्म बाँके जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । बीमा कम्पनी खोल्न दिएको थिएन्’, मोटिभेटसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘तर पनि उहाँको काम हामीले फास्टट्याक मार्फत गरिरहेका छौँ । उहाँको एउटा डकुमेन्ट पुगेको थिएन। त्यही भएर ढिला भएको हो ।’ उनले निषेधाज्ञा भएको बहाना बनाएको भएपनि जेठ २४ गते एलआईसी नेपालको कार्यालयमा अधिकारीको निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ ।
अस्पतालको डेथ सर्टिफिकेटमा केही त्रुटी भएकोले ढिलाई भएको उनको भनाई छ । ‘त्यो सच्याउन पर्ने भएकाले हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका थियौँ । त्यो सर्टिफिकेट आइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘अबको तीन चार दिनमा चेक बन्छ ।’
१) नेपालमा भ्रम छर्दै भारतीय बीमा कम्पनी, यस्तो छ नेपाली लुट्ने एलआइसीको नयाँ धन्दा
२) भारतीय बीमा कम्पनीको नेपालमा लुट, बीमा समितिलाई झुक्याएर ठगी
३) एलआइसीको ‘जीवन बचत बीमा योजना’मा ‘त्रुटि’ नै ‘त्रुटि’
४) एलआइसी नेपालमा जीवन बीमा गर्दै हुनुहुन्छ ? पख्नुहोस… फस्नुहोला !
५) जनताको प्रश्न : एलआइसी बन्द भए हाम्रो बीमा के हुन्छ ?
६) एलआइसी काण्ड : आफ्नो बदमासी ढाकछोप गर्न विज्ञप्तिको नाटक (विज्ञप्तिसहित)
७) आफ्ना कर्तुत लुकाउन एलआइसीको फण्डा : पत्रकारलाई करोडको अफरदेखि प्रहरीमा उजुरीसम्म
८) भारतीय बीमा कम्पनी एलआईसीमा संचालक समितिको ब्रमलुट, यसरी हुन्छ ‘मामाको धनमा फुपुको श्रद्दा’